ဘယ် Mobile Legends ဟော်လိုးဝင်း Skin ကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲ? | Codashop Blog MM
Home Games ဘယ် Mobile Le...
ဘယ် Mobile Legends ဟော်လိုးဝင်း Skin ကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲ?
ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ဟာက ရုပ်အပေါက်ဆုံးလဲ?
ဟော်လိုးဝင်းရာသီလည်း ရောက်တော့မှာဆိုတော့ တစ်ချို့ MLBB ဟီးရိုးတွေက ကြောက်စရာပုံစံတွေပြောင်းလာကြပြီ။ ဒီ MLBB ဟော်လိုးဝင်း Skin တွေက သိပ်ကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးဆရာဝန်နဲ့ စာခြောက်ရုပ်စတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောက်စရာကောင်းတာအပြင် တစ်ချို့တွေက ရုပ်တောင်တောင်ပြောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်ဟာတွေက အကြောက်စရာကောင်းပြီး ဘယ်ဟာတွေက ရုပ်အပြောင်ဆုံးလဲဆိုတာ အောက်ကစာရင်းမှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်!
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကနေ စရအောင်ဗျာ။ တစ်ချိန်က သိပ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ဒီမုဆိုးဟာ အခုဆိုရင်တော့ လူတစ်ပိုင်း၊ ဝံပုလေတစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်တော့နာမည်မကြီးလှတဲ့ Dr. Beast Epic Skin မှာဆိုရင် ဓာတ်ခွဲခန်းဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားပြီး လက်မှာတော့ Machine Gun နဲ့ နောက်ကျောမှာ ဧရာမဆေးထိုးအပ်ကြီးနှစ်ခုကလည်းပါသေးတယ်ဗျာ။ သူဆေးကုတာတော့ ခင်ဗျားခံချင်လိမ့်မှာမဟုတ်လောက်ဘူးဗျ။
Franco – လယ်ကွင်းထဲက အိပ်မက်ဆိုး
ဒိတ်အောက်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ စာခြောက်ရုပ်ဝတ်စုံနဲ့ Franco ကို Battle မှာ ရန်သူတွေဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ကြမှာအမှန်ပါ။ ဒီ Wheatfield Nightmare ဆိုတဲ့ Skin မှာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဓားမြှောင်နဲ့ ခရင်းခွတို့လည်းပါနေလို့ သိပ်ကိုမိုက်နေပါတယ်။ ဒီလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ စာခြောက်ရုပ်စောင့်တဲ့ လယ်ကွင်းထဲကိုတော့ မသွားချင်ပါနဲ့နော်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Leomord’s Jack-o’-lantern ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းပြတ်နေတဲ့နေရာမှာ ဖရုံသီးအစားထိုးထားတဲ့ မြင်းစီးသမားထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတာရှိပါဦးမလား? ညဥ့်နက် လမ်းမှာဒီတစ်ကောင်နဲ့သာတိုးရင် ကြောက်ပြီးသေမှာအမှန်ပါပဲ။ သူ့အဖော်ကလည်း ကြည့်လိုက်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါတောင်ရချင်စရာကြီးဗျာ။
Clown တွေရဲ့ ပုံစံကိုက ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတော့ Karrie ရဲ့ Jester skin ကရောကြောက်စရာမကောင်းပဲ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ Harley Quinn ကိုတုထားတဲ့ ဒီ Marksman ရဲ့ဝတ်စုံနဲ့ မျက်နှာမှာခြယ်ထားတာတွေက သိပ်ကိုခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ သူမက လွှတ်မြောက်နေတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Clown တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ဟာသတွေပြောပြီးပြီးမယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။
ဒီနှစ်မှာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ ဟော်လိုးဝင်း Skin အသစ်နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကတော့ Barat ရဲ့ Baratstein Skin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Skin မှာ Detona ကို သိပ်ကိုချွန်ထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ အစိမ်းရောင်သတ္တဝါကြီးအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်ကြီးကသာ သင့်ဆီတည့်တည့်လာပြီး သူ့ရဲ့ချွန်ထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ ကိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်သိမ်းပြီပဲဗျို့။
Nana – သင်္ချိုင်းထဲက ပါတီ
Nana ရဲ့ Graveyar Party ဆိုတဲ့ Skin က ကုမ္ပဏီရဲ့ဟော်လိုးဝင်းပါတီမှာ ဝတ်မယ့်ဝတ်စုံပုံပေါက်နေပါတယ်။ အနက်နဲ့ ခရမ်းတို့ရဲ့လိုက်ဖက်မှုနဲ့အတူ Nana ရဲ့အထင်ဂရဦးထုပ်မှာ လင်းနို့တောင်ပံနဲ့ ဖရုံသီးမျက်နှာပုံပါတာတွေက ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှကြောက်ဖို့‌ကောင်းမနေပါဘူး။။
ဒီ အမျိုးသမီး Support/Tank ရဲ့ဝတ်စုံကလည်းဆိုးတော့မဆိုရှာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဝတ်စုံက လမ်းပေါ်မှာ ကလေးတွေ Trick Or Treat လုပ်ရင်း သကြားလုံးလိုက်တောင်းတဲ့အချိန်ဝတ်တဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ပိုပြီးတူနေပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ပါတီသွားမလား? ဒါဆိုရင်တော့ (၈)နှစ်အောက်ကလေးတွေကြားမှာ ဒီဝတ်စုံနဲ့ အကောင်းဆုံးဝတ်စုံဆုရနိုင်ပါတယ်။
Cyclops – ကောက်ရိုးအရုပ်
နောက်ဆုံးမှာတော့ Cylops ရဲ့ Straw Doll (ကောက်ရိုးအရုပ်) ဆိုတဲ့ Skin လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Skin မှာဆိုရင် နာမည်ကြီး မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲပါတဲ့သူကို ချစ်စရာ ဘွတ်ဖိနပ်စီးထားတဲ့ ကောက်ရိုးအရုပ်လေးအဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လှည့်ဆရာဦးထုပ်နဲ့ သကြားလုံးလေးတွေလိုမျိုး Skill Effect တွေကလည်း သိပ်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ နဂိုရှိနေကျ Lollipop ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ပုံစီမျိုးနဲ့ကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ကောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်လေးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
Codashop မှာပဲ Mobile Lengends စိန်တွေဝယ်ယူလိုက်ပါ။ လွယ်ကူ၊ လျင်မြန်ပြီး စိတ်ချရတဲ့အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Previous articleCodashop Halloween ဖုန်းဘေလ် Giveaway
Next articleMLBB စိန်ဝယ်ပြီး 11.11 မှာကံစမ်းလိုက်ပါ!